Lungisa inkinga ye-boot ku-Ubuntu ne-Linux Mint (Initramfs) | Kusuka kuLinux
Lungisa inkinga ye-boot ku-Ubuntu ne-Linux Mint (Initramfs)
nxumalo | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Sanibonani nonke, kulokhu ngifuna ukuhlanganyela ekuxazululeni inkinga ye-boot ebizwa ngokuthi Initramfs, Ngicabanga ukuthi ezinye zenzekile futhi kulokhu ngithole iphutha.
Ngisesha iwebhu emakhasini ahlukahlukene ekugcineni ngikwazile ukuqoqa imininingwane futhi ngemuva kwalokho ngazama isisombululo esilula futhi kwaba yimpumelelo.
Ukuqala silandela lezi zinyathelo:
Sifaka i-CD yethu ebukhoma (Masingakhohlwa ukumisa i-BIOS ukuqala kwi-CD.) Sivula isiginali bese sibhala:
Sinikela Faka futhi izosinika igama ledivayisi i-PC yakho eqala ngayo. isibonelo:
IDiski / i-dev / sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes 255 heads, 63 sectors / track, 30401 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: ********** Idokodo Le-Boot Start End Blocks Id Uhlelo / dev / sda1 * 1 30238 242886703+ 83 Linux / dev / sda2 30239 30401 1309297+ 5 Extended / dev / sda5 30239 30401 1309266 82 Linux swap / Solaris
Sibhala okulandelayo futhi esigungwini sethu bese sinikeza Faka:
Silinde wena ukulungisa ukwahlukanisa. Ekugcineni siqala kabusha futhi sikulungele kufanele kuqale ngokujwayelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Lungisa inkinga ye-boot ku-Ubuntu ne-Linux Mint (Initramfs)
Imvamisa lokhu kwenzeka lapho ukwahlukanisa (okunye noma konke) kunokungahambelani. Uma uqhuba lowo myalo, uzohlala usibuza ukuthi sifuna ukulungisa. Ukwenza kube okuzenzakalelayo sisebenzisa:
Kunganconywa kakhulu ukusebenzisa leli thuluzi ngokuya ngokwahlukanisa, okungukuthi:
Ukushintsha i-ext4 yohlobo lokwahlukanisa esifuna ukukulungisa.
Kunjalo ... KAKHULU umnikelo omuhle
Siyabonga ngokuthunyelwe namazwana abekiwe.
U-elav ugcwalise izindaba kahle kakhulu, ngiyabonga ngolwazi. uqobo lwami ku-mint ngiphume isikhathi esingu-1 ekuqaleni njengoba kuchaziwe kepha ngingedwa ngiqale ukululama futhi ngiqala, ngani? kwazi bani kodwa kwakuyicala elifanayo elichazwe. ngiyabonga imikhonzo.
Ngikhuluma ngeMint, ngoMgqibelo ngisize umngani ukufaka iMint, kanti wow, ngemuva kwezinyanga zokusebenzisa iFedora kuyaqabula impela ukubona isifaki esinethezekile nesinembile ...
UFrancisco Gomez kusho
Umuntu akudingeki ukuthi alungise lolu hlobo lwento, Ubuntu ne-mint kufanele kube yi-distros yabasebenzisi abayisisekelo.
Phendula i-francisco gomez
Unjalo uFrancisco kodwa akulimazi ukufunda okusha nokukusebenzisa.
Ngemuva kokubuyiselwa kabusha kwakamuva kwe-ubuntu 12.04.2 kunginikeza izinkinga zokuqalisa (lapho ngaphambi kokuba kulungile). Kwesinye isikhathi ngemuva kokulayisha i-grub ihlala esikrinini esimnyama, noma ihlala inamathele ngemuva kwesikrini sokungena ngemvume nangezinye izikhathi ingilayisha kahle. Lapho into yokuqala yenzeka ngingena ku-TTY ukuze ngiqale kabusha i-Sudo kepha ayiphenduli, futhi lapho ngibuya kunemiyalezo eminingi yephutha. Lapho ilenga ngemuva kwesikrini sokungena ngemvume kwesinye isikhathi i-AltGr + ImpPant + K noma i-sudo pkill Xorg evela ku-TTY isebenza.
Kuze kube yilapho ngifunda i-athikili yakho, bengikholelwa ukuthi umenzi wecala yifayela le-rc.local elilungiswe yimina ukuze kube yikhadi elihlanganisiwe kuphela elisebenza lapho kuqalwa, njengoba kwakunjalo ngaphambi kokufakwa kabusha, kusebenza ngaphandle kwezinkinga. Kepha manje senginokungabaza, kungenzeka yini ukuthi ukwahlukanisa okunamaphutha kubangele lokhu kwehluleka? Ngiyakhumbula ukuthi ekuqaleni kokufakwa kwesifaki Ubuntu ifaka umyalezo wokuthi isusa amafayela aphikisanayo ...
Yeka ubudedengu ...
Uxolo kodwa ngiphikisana ngokuphelele nalolu hlobo lokuthunyelwe okubizwa ngokuthi yisixazululo senkinga ejwayelekile, bagqugquzela umfundi ukuthi angafundi ngokungachazi ngokuphelele (yini ama-initramfs? Yini i-fsck? Yini okungahambelani isistimu yefayela?) ukuyenza ukuthi uyikopishe bese uyinamathisela ngaphandle kokuqonda ukuthi kungani futhi kuyenza ibukeke njenge-GNU / Linux kuma-nerds kuphela.
Uxolo, kepha abasebenzisi basizwa impela ngokubafundisa, hhayi ukubeka umyalo ngemuva komunye ngaphandle kokuqonda ukuthi kungani bebeka okuthile.
Kucatshangwa ukuthi ukuxazulula le nkinga kufanele ngabe uyazi ukuthi kusho ukuthini, awukwazi ukuqala ukukopisha imiyalo ezokopishwa, iqiniso lokuthi lishicilelwe kanjena nje ukunika umbono kusixazululo, kepha kufanele ngabe uyazi ukuthi yini uyakhuluma.
Akunasidingo sokuchaza igama ngalinye elibhaliwe.
Ukube umsebenzisi ubazi ukuthi yini i-fsck nokuthi ikuphi i-initrd, bekungeke kudingeke ukuthi afake okokufundisa okumtshela ukuthi angayidlulisa kanjani i-fsck.
uma lowo muntu efuna ukufunda, yena yedwa uzobheka ukuthi umyalo ngamunye wenzelwe ini.
Ngivumelana ngokuphelele nokuphawula kwakho.
Ngaphandle kokubukela phansi umsebenzi wombhali weposi.
Kukuluphi uhlobo olunikeza lelo phutha.
Kuze kube manje, ngibe yi-mint 13 izinyanga ezingaphezu kwezingu-8 futhi nginokucinywa kukagesi okuningi futhi angikangeni kulelo phutha.
Enye into, kuzoba yinguqulo ye-kernel ???
Kungaba kunoma yiluphi uhlobo lwe-Mint noma Ubuntu futhi inkinga ivele ngokungalindelekile, kepha nasi isixazululo.
Angazi lutho kusho
Sawubona Raven291286, ngiyisayensi yamakhompiyutha "nosenada" kodwa ngiyazi ukuthi iLinux iyona ehamba phambili emakethe futhi ngikholisekile ngayo. Inkinga ukuthi lapho lezi zinto zenzeka futhi ngidinga umuntu ozongisiza ukuzilungisa, ngoba njengoba ngikuchazile, ngiyikhompyutha "nosenada", umsebenzisi ojwayelekile, angitholi muntu futhi kulapho-ke ngithola khona lezi zinkundla ezinhle kakhulu zokuzisiza.
Ngamafuphi nje, ngithole umuntu ozochaza ukuthi i-Live CD yini, ngayilanda, nginayo. manje angikwazi ukwenza ikhompyutha iqale ku-cd. Ngicabanga ukuthi kuzoba ngoba anginakho okubiza nge-BIOS okulungiselelwe ukuqala ku-CD.
Ngabe othile angangichazela ukuthi angenzela kanjani lokho, i- "nosenada" ingalungisa ikhompyutha yami futhi iqale i-linux?
Kulungile bheka ukuqala ungangitshela ukuthi i-pc yakho iluphi uhlobo lomkhiqizo? Futhi ngakho-ke ngingakutshela ukuthi ungayifaka kanjani i-BIOS, izinkinobho ongangena ngazo ziyahlukahluka kuye nge-pc efana ne- "F2, F8, F10, F12, F9 njll" zama lezo, kufanele uqale kabusha i-pc nangaphambi kwayo ibuyisa i-boot press eyodwa yalezi zihluthulelo futhi yile ndlela ongangena ngayo kwimenyu ye-BIOS.
S Mariola kusho
Ngiyabonga uRaven no-Elav
Izixazululo ozibonisayo zisebenze ngokuphelele
Phendula uS Mariola
Ngiyaxolisa ngesiphazamiso…. kepha lapho wenza umyalo: Sudo fsck / dev / sda1
fsck kusuka ku-use-linux 2.20.1
fsck: fsck.ntfs: ayitholakali
fsck: iphutha 2 ngenkathi kwenziwa i-fsck.ntfs ye / dev / sda1
Iqiniso ukuthi angazi ukuthi siyini isizathu sokuthi kungani kubonakala kimi ...
bese ngizama nge:
e2fsck 1.42 (Nov 29, 2011)
fsck.ext2: imvume inqatshiwe ngenkathi kuzanywa ukuvula / dev / sda1
iningi unokufinyelela kwe-r / w kusistimu yefayela noma ube yimpande
bese ngiqala empandeni ngomyalo: Sudo -i
Ngiqhuba umyalo futhi: fsck / dev / sda1 -y
futhi kungikhombisa lokhu:
Ngizama ngomyalo: fsck.ext2 / dev / sda1 -y
i-fsck.ext2: Vimba ukuvimbela okungavumelekile, izama ukuvimba okwenziwa isipele
fsck.ext2: Inombolo yomlingo omubi ku-super-block ngenkathi izama ukuvula / dev / sda1
I-superblock ayikwazanga ukufundwa noma ayichazi i-ext2 efanele
uhlelo lwefayela. Uma ukwahlukana kusebenza futhi kuhamba kuqukethe i-ext2
isistimu yefayela (hhayi ukushintsha noma i-ufs noma enye into), bese i-superblock:
Manje kufanele ngenzeni?
KWENZEKA KWAMI OKUFANAYO KODWA NGESpanishi !! Ngingathanda ukwazi ukuthi ungayilungisa kanjani ubuntu 12.04 lts
URicardo Bélico kusho
Qiniseka ukuthi i-sda1 akuyona ukwahlukaniswa kweWindows. Ukwenza lokhu, into yokuqala ukuqala kabusha nge-CD ebukhoma noma i-USB ebukhoma bese usebenzisa umyalo Sudo fdisk -l njengoba usho ekuqaleni kokuthunyelwe nezinye izinyathelo. I-Fdisk ayikuvumeli ukuthi ushintshe ungayilungisi uma isetshenziswa. Uma nginephutha ngicela ungilungise.
Phendula uRicardo Bélico
Ngiqala ukwazi i-UBUNTU, ngiyi-newbie impela. Kepha nginentshisekelo yokufunda ngokufunda ngalolu hlelo lokusebenza. Bengizoyifaka ekhaya, kepha ngithole iphutha ekufakweni. Ungangitshela ngewebhusayithi echaza ngokuningiliziwe ngokufakwa kwe-UBUNTU nokuthi yini i-newbies engayenza uma unanoma iluphi uhlobo lwezinkinga emzameni. Ngiyabonga kusengaphambili.
Sawubona. Ama-Initramfs angihlukumeza. Ngabe sikhona isisombululo ngaphandle kwe-CD ebhuthayo? Ngabe ukuqeda kusuka ku-pendrive kungenziwa? Uma kunjalo, kufanele ngiyilungiselele kanjani? Ngiyabonga
Akunasidingo sokuqalisa i-Live-CD
Vele usebenzise ikhonsoli ebonakala ekuqaleni, kukhawulelwe ebhokisini elixakekile kepha kusasebenza kuphela ukuthi awudingi izimvume ze-Sudo
Sawubona, isiphakamiso sakho singisizile, ngiyabonga kakhulu. Kepha iyazilungisa futhi yenza okufanayo futhi. Lokho wukuthi, akuqali. Zibonakala njengamaphutha emabhulokini lapho ngiwathola, kwesinye isikhathi ngiyanaka futhi kwesinye isikhathi anginaki. Kepha inkinga iyaqhubeka. Angazi ngenzeni?
Sawubona isiphakamiso siyasebenza. Inkinga ukuthi kaninginingi unenkinga efanayo. Ngaphezu kwalokho manje ibha yamathuluzi nesilondolozi sesikrini kunyamalale.
Ngibeke ukuvuselelwa kepha akukho lutho, akuvunyelwe ukuvuselelwa futhi kuthi kunamaphutha kumaphakeji.
Isistimu yokusebenza onayo iyi-linux mint Petra.
Sawubona, igwababa ...
Angikwazi ukulungisa inkinga yami ebhuthini.
Ngicela ungazise uma ungangisiza ngale ndaba. Kungcono uma sisebenzisa ingxoxo, ukuthumela imiyalezo ngokushesha, ngithi.
Uma ungangisiza, ungazise ukuthi yisiphi isikhathi esikulungele kakhulu, ngakho-ke ngizokunikeza imininingwane yezobuchwepheshe yemishini noma olunye ulwazi oludingayo.
Ngiyabonga kusengaphambili ngosizo,
Ngaleso sikhathi ngangibe nezinkinga ngalesi sikrini futhi kwenzeka kimi zombili ku-linux mint nasekuqaleni, ngazama KONKE futhi akukho okusebenzayo. Ekugcineni ngithole ukuthi bekuyikhadi lami lemidwebo elingasekelwa nabashayeli abafakwa ngokuzenzakalela. Bekufanele ngiyisuse, ngifake abashayeli abambalwa futhi lapho ngibuyisela ishadi lami, NGILUNGILE. Konke kuhle! Into exakayo ukuthi lokhu kwenzeke kimi kuphela nge-mint ne-elementary, ngizamile ubuntu 14.04 no-debian 7 futhi akukho neyodwa kwi-distro engu-2 enginikeze ezinye izinkinga ngaphandle kwe-flicker encane esikrinini eyanyamalala ngemuva kokuvuselela
Akuzange kungisebenzele »Sudo fdisk -1» Bekufanele ngibhale »Sudo fdisk -l»
Ngizamile konke ongitshele khona futhi akwenzi lutho othi kufanele ukwenze.
Endabeni yami ngithola lo mlayezo:
ukukhweza: mounting / dev / disk / by-uuid / 709569c0-ffc8-414e-8337-e55dd68665a1 ku / impande yehlulekile: Impikiswano engavumelekile
ukukhweza: ukukhweza / i-dev ku / impande / ihlulekile: alikho lelo fayela noma umkhombandlela
ukukhweza: mounting / sys on / root / sysfailed: no such file or directory
ukukhweza: mounting / proc on / root / proc kwehlulekile: alikho lelo fayela noma umkhombandlela
Uhlelo lwefayela elihlosiwe alucelwanga kabusha / sbin / iyunithi.
Ayikho i-init etholakele. Zama ukudlulisa init = bootarg
IBusybox v1.18.5 (ubuntu 1: 1.18.5-1ubuntu4.1) igobolondo elakhelwe ngaphakathi (umlotha)
Faka »usizo» ukuthola uhlu lwemiyalo eyakhelwe ngaphakathi
Ngiyakucela ngicela, uma kukhona onolwazi lokuthi angayixazulula kanjani, ngitshele igxathu negxathu.
UManuel Ulloa kusho
ngiyaxolisa, ngicabanga ukuthi ngithumele kabusha inkinga efanayo ngezansi,…. Nami nginjalo
Phendula uManuel Ulloa
wolfgang rodriguez kusho
Ntambama, lapho wenza lezi zinyathelo, akukho datha elahlekile mayelana nalokho engikugcine lapho. Ngimusha ku-debian futhi nginemininingwane ebalulekile ku-pc yami. futhi ngathola iphutha le-initramfs.
Ilinde impendulo yakho esheshayo.
Phendula ku-wolfgang rodriguez
Nginekhompyutha yedeskithophu ene-Ubuntu 10.04. Ngemuva komyalezo wephutha lokufakwa kwamandla uveza ibhokisi elinemininingwane bese ulungile. Isikhombisi ngu-X. Ngiyasamukela futhi isikrini simnyama. Yini okufanele ngiyenze ukuze uyiqale? Anginayo i-cd noma i-intanethi, kepha yisikhathi sokushintsha umshini. Ngingaluthola kanjani olunye ulwazi? Kungenzeka yini ukuthi ngifaka isikrini somyalo nge-Ctrl + Alt + F1? Ngiyabonga ngosizo lwakho!
U-Alfonso Jiménez Mohedano kusho
Kungisebenzele ngokushintsha inketho yokumisa yamadrayivu we-SATA ku-BIOS.
Ngikubeka kusuka ku-IDE kuya ku-AHCI naku-voila !!
Ezempilo @ s
Phendula u-Alfonso Jiménez Mohedano
Ngiyabonga kungisebenzele ngengxenye yokuqala kuphela, ngiyabonga ngosizo. : *
Sawubona, ngifisa ukwazi ukuthi ukwenza lokhu okukhombisa ukuthi amafayili asusiwe yini ... futhi uma kunje ngingawavuselela kanjani ngaphambi kokufaka kabusha uhlelo, ngiyabonga kusengaphambili
Sawubona, nginenkinga engingazi ukuthi ihlobene yini nenkinga yamanje, i-netbook yami, iyi-ubuntu futhi konke bekuhamba kahle kuze kube yilapho ibuyekezelwa ku-version 15 uma ngikhumbula kahle, inkinga ukuthi ngayeka ukubuyekeza uhlelo futhi ngashiya ekhaya, lapho ibhethri ifika yayifile, okungukuthi, ngokusobala ayizange iqede ukubuyekeza futhi yasala isigamu, ngingaqala kanjani?
Okwenzekayo ukuthi ngifaka ubuntu futhi ngine windows 8 ngasusa windows 8 no ubuntu futhi ngangifuna ukufaka windows 8 futhi kepha yangicela ukuthi ngibe nememori engama-500 gb ngakho ngifomathile i-hard drive yami futhi ngaqala kabusha i-pc yami kodwa lapho ngifaka izinketho ezine kwavela 1 Ubuntu 2 ongakhetha ezithuthukile zokuhlolwa kwememori ye-ubuntu 3 (memtest86 +) 4 memory test (memtest86 +, serial serial 115200) futhi lapho ngiyifaka ku-ubuntu ayingeni futhi ithola umyalezo ongajwayelekile ovela ku-imintramf okuthile okufana nalokhu ebengifuna ukwazi ukuthi kungaxazululwa yini uma kungenjalo ngiyabonga noma kunjalo
Okwe-initframfs ungasebenzisa le vidiyo: https://www.youtube.com/watch?v=91TaW1LCRkM (Amasekhondi angu-33).
nokufaka amawindi 8 futhi, ngoba inqubo ejwayelekile ukufometha ukwahlukanisa lapho uzoyifaka khona, noma idiski bese uqhubeka nokufaka.
Uma ufuna ukwenza i-dual-boot, ukuqala windows / ubuntu, kunenkinga yokuthi manje amakhompyutha amasha awavumeli ukufaka ukusatshalaliswa kwe-linux, ngenxa yemodi ye-UEFI boot, kimi kufanele ngikhubaze leyo nketho bese ngisebenzisa i-linux, uma ngifuna ukusebenzisa amawindi ngiyaphinda ngiyisebenzise.
Kepha okwenzekayo ukuthi angivunyelwe ukungena ku-ubuntu kuphela kuvela futhi iqala ukulayisha kepha bese kuqala i-initramsf futhi angikwazi ukungena noma yini ngoba lapho ngiyivula kwavela ubuntu yangibuza iphasiwedi futhi manje akukho okubonakala kimi, kuvela ukushaja kuphela futhi kungangeni njengoba kungaba njalo
ULeonardo hurado kusho
ubusuku obuhle canaima yomfowethu ayiqali futhi ngilandela izinyathelo kepha uma ngenza umyalo Sudo fsck / dev / sda2 ngithola
Amafayela. uma ngabe idivayisi isebenza futhi iqukethe i-ext2
fileiste (futhi ungashintshi noma i-ufs iye kokunye), bese i-superblock
konakele, futhi ungazama ukusebenzisa i-e2fsck ngenye i-superblck:
Phendula u-leonardo hurado
Sawubona, ngihlala eVenezuela futhi le nkinga yenzeke kudivayisi yaseCanaima. Anginayo i-cd ebukhoma noma i-usb enedatha, ngabe kuzoba khona indlela yokuyilungisa
Ngiyabonga kakhulu, nakanjani luye lwasindisa usuku lwami, ngiyabonga ngokwabelana ngolwazi olunginike lona ngeKubuntu 15
Ngiyabonga kakhulu igwababa okokuqala lapho kwenzeka kimi ukuthi ngifake i-ubuntu 15.04 njengamanje futhi ngiyayixazulula njengoba ushilo nge-boot disk! - Jabula
Ku-Ubuntu 16.04 ngikwazile ukuyilungisa ngokuvula i-Ubuntu kuzinketho ezithuthukile ngokukhetha inketho yokutakula. Lapho ifinyelela kuma-initramfs, ikhombisa ukuthi iyiphi i-partition ye-fsck, ezoba ukwahlukanisa i-boot, ngakho-ke vele usebenzise:
fsck / dev / igama olibonisayo
Bese umaka inketho "y" kunoma yikuphi ukulungiswa okucelayo
Ngiyabonga kakhulu kwakuphelele!
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi kungani lokhu kungenzeka? Ngine-hard drive entsha (engisanda kuyithenga) futhi lokhu okwenzeke kimi kungishiya ngizibuza.
Ngibonga kakhulu! Isebenza kahle
Sawubona, inkinga yami ukuthi kwenzeka kimi kwi-disttro ebukhoma futhi kungilayisha ibhokisi elixakekile, ngakho-ke le miyalo ayisebenzeli mina. futhi anginalo uhlelo lwe-linux lokusebenzisa.
Ngiyabonga kakhulu ngokuthunyelwe !!!
Ngicime i-laptop ngenkathi ngikopisha amafayela kusuka kusigaba sami / semidiya / sesitoreji ngiya ku-usb bese angikwazi ukufinyelela ukwahlukanisa futhi. Bengicabanga ukuthi kufanele ngifomathe futhi ngilahle idatha ethile, kepha cha.
Futhi, ngiyabonga kakhulu
UGabriela Vargas A. kusho
Ukusebenza kahle kakhulu kimi
Phendula uGabriela Vargas A.
UVictor Manuel Lopez Collado kusho
Angikaze ngisebenzise i-Linux, futhi izolo ngafaka iLinux Mint, kepha lapho ulimi luya khona ngibeka iMexico Latinoamerica dvorak. Njengoba kunengqondo, lapho ngifuna ukubhala ... Yebo, kunginikeza uchungechunge lwezinhlamvu ezihluke kakhulu kulokho engifuna ukukubhala. Ngingakuxazulula kanjani lokho? Ngabe kuzofanela ngifomathe i-Hard Drive bese ngifaka kabusha i-Linux Mint?
Ngiyasazisa izeluleko neziphakamiso zakho kusengaphambili.
Phendula uVictor Manuel Lopez Collado
URaül Agulló kusho
Siyabonga ngePosi. Ungikhiphe ezinkingeni ngeCD yeKnoppix ebukhoma.
Siyakuhalalisela ngomsebenzi owenzayo.
Phendula uRaül Agulló
Ngiyabonga .. kusebenzile. Inkinga yami ivele lapho ngidabula ukwahlukanisa lapho kufakwa khona i-linux deepin yami. Mayelana nencazelo yomyalo, kunenkundla egcwele leyo mininingwane. Ngicabanga ukuthi inhloso yalolu shicilelo ukunikeza isisombululo. Isibonelo bengivele ngifuna umyalo. Ungachithi isikhathi ubheka ukuthi into ngayinye isho ukuthini
Angiqondi ukuthi ngizongena kanjani nge-CD ebukhoma futhi ngilungiselele ama-bios ukuqala i-laptop, uma ngifuna, ngingaphuma enkingeni enginayo
Sawubona, ngiyabonga ngokufaka. Nginaleli phutha ku-Debian 9. Imiyalo isebenza kimi ngokuphelele. Kepha njalo lapho ngiqala iWindows 7 kungiphosela iphutha lokwahlukanisa. Lapho-ke lapho ngiqala iDebian futhi ngithola isikrini esifanayo se-initramfs futhi kufanele ngenze inqubo efanayo ye-fsck. Futhi kwenzeka kuphela lapho ngiqala iWindows ngoba konke kusebenza kahle. Ngizamile ukufaka kabusha i-grub futhi inginike umphumela ofanayo. Noma yisiphi isixazululo?
U-Andrés Choque Lopez kusho
Okuthunyelwe kunemininingwane engeyona. I- "Initramfs" akulona igama lesiphazamisi, uhlelo oluncane olilayisha ndawonye i-kernel ibe yi-RAM ngezikhathi zokuqala zebhuthi.
Uma ukubhutha kuma kuma-initramfs, kungenxa yokuthi awukalifaki uhlelo lwefayela lempande (/) ngenxa yenkinga ethile.
Phendula u-Andrés Choque Lopez
Ngiyangeza ngoba ngithumele amazwana ngephutha ngaphambi kokuqeda.
Lesi sixazululo esivela kokuthunyelwe sisebenza uma ukwahlukanisa okubekwe ku "/" kunamaphutha (njenge-UNEXPECTED INCONSISTENCY kulolo hluko). Kunezinye izimbangela ukuthi i-boot ilenga kuma-initramfs futhi ayilungiswa ngomyalo we-fsck, izibonelo: ukwahlukanisa akutholakali; ukwahlukanisa ukukhweza akuzange kuchazwe ku "/" kuzinketho zokuqalisa (impande inketho =…); uyalelwe ngesandla ukuthi ume lapho. Futhi okuthunyelwe kuphakamisa ukuthi uma ama-initramfs ephuma, khona-ke "isixazululo" salokho (ngaphandle kokubona imininingwane yesizathu) nguSudo fsck…. Kungani?
Ngize lapha ngoba ukuxhumana kwalokhu okuthunyelwe kusabiwa kuze kube yilolu suku, futhi kuyangikhathaza (futhi kuyangithukuthelisa) lapho ngibona lezi zixazululo.
U-Eduardo Andrés kusho
Ngiyabonga, crow291286! Njengoba empilweni yami nginokuhlangenwe nakho okungaphansi kwenyanga ngohlelo lokusebenza lweLinux (okwami ​​iMint 19.3), nganikezwa le nkinga ngeshwa angitholakalanga isisombululo esithangamini esisemthethweni seLinux Mint ngeSpanish: lapho Ngibize ngokuthi:
"Izinkinga eziningana ezethulwe ngasikhathi sinye, kusukela ekubuyekezweni?"
Kepha lesi sifundo singisizile njengoba besinikeza ukuqonda okuthile ngenkinga yami ethile (ama-initramfs), kuphela ngaphandle kokusebenzisa i- "Sudo" futhi kusuka ku-terminal efanayo? lapho kuvela khona inkinga. Ngicacisa ukuthi amakhasi ambalwa nawo abewusizo kakhulu nawo abewusizo ukuqiniseka ukuthi ngizokwenzani:
https://www.youtube.com/watch?v=I_Nnq9HDQrA (Iphutha lokuqala i-Linux (initramfs) lilungisiwe!)
Ukuthi baphilile kakhulu.
Phendula u-Eduardo Andrés
UJuan Araujo kusho
Akudingekile kusuka ku-usb noma ku-cd ebukhoma, futhi kungavela ku-init, futhi akuyona njalo / i-dev / sda1
Phendula uJuan Araujo
i-linux lite yami ayiqali, ifaka ezinye izinhlamvu ezithi kulayishwa i-ramdisk yokuqala, ngiyisusa kanjani leyo nto ngiyishiye injalo, ngicela usize
Odpaliłem Linuxa z pendrive bo mam jeszcze z czasu ukufakwa z tego nosnika i mogę odpalać jako bukhoma usb.
Użyłem fsck ngiyaqalisa kabusha
Katarína Ján kusho
Chcel ngu som poďakovať spoločnosti Lapo Micro Finance za poskytnutie pôžičky. Niekoľkokrát som bol oklamaný, ke som som snažil získať pôžičku, až som narazil na spoločnosť Lapo Micro Finance, ktorá mi poskytla pôžičku v hodnot 23 000 dolárov na starostlivosť noma moje choré dieťa. Ak dnes potrebujete skutočného veriteľa, kontaktujte Lapo a nenechajte sa oklamať. I-imeyili Yokuxhumana: lapofunding960@gmail.com
Phendula uKatarína Ján
Gada umsebenzi womsebenzisi ngomyalo we-acct
Susa igama lomsebenzisi esikrinini sokungena ngemvume se-Skype